विचार | eBachan Nepali Christian Magazine
हातमा सीप नभएको मानिस झैं” हामी पनि सेवाकाईमा यो निराशाजनक भाषा प्रयोग नगरौं। “जे जे अाइपर्छ, त्यही त्यही नै काम गर्ने हो। जहाँ जहाँ जुनसुकै काम पाइन्छ, त्यही नै गर्दै जाने हो। घरि यता घरि उता, यदि काम भएन भने उदेश्य-लक्ष्य बिनाको घरमा नै काम बिहिन, खाली जीवन नै बिताउने हो। तर हामी हातमा सीप नभएको बेरोजगारी मानिस जस्तै नबनौँ। ...	Read More »
एजेन्डा विनाको एकता समाथि स्थलको निम्ति एकता सालिन समाज निर्माणको निम्ति एकता राजनीतिक पदको निम्ति एकता छाडापनको निम्ति एकता खै कता कता अव हुन्छ रे एकता ++++ कसैको इसारामा एकता बुद्धि र शारिरीक बलमा एकता ए हजुर कता अव हुन्छ रे एकता +++ टुक्राउने एकता बङगाउने एकता समाज र महासंघको बार्ता कता अव हुन्छ रे एकता +++ बाँझो खेतमा जोत्ने ...	Read More »
पाटनबाट भागेर संगति भेट्न गाउँ
बनपाखा हरिया बन्दै थिए । विभिन्न लेक पहाडहरुमा सेतो कुइरो मडारीरहेको थियो । खेतमा रोपेका मकै पनि विस्तारै बढ्दै थिएँ । वर्षा याम सुरु हुनै लागेको थियो । हरियालीले गाउँको सौन्दर्यता झनै बढाउँदै थियो । वर्षा याम सुरु भएकोले गाउँलेहरुले गाईभैसीँहरु पाटनमा लगिसकेका थिए । केहि समयका लागि मेरा बा आमाले पनि मलाई पढाइ छोड्न लगाएर भैँसी हेर्न भनी गाउँबाट ...	Read More »
मंगलवार १६ जेठ (३० मई) न्यायकर्ता ६ः१–१८ गिदोनको छनोट आफ्नो काम गर्न परमेश्वरले सानाहरुलाई चलाउनुहुन्छ । दबोरा र बाराकलाई उठाएर परमेश्वरले इस्राएलीहरुलाई कनानीहरुको अत्याचारबाट मुक्त गर्नुभएको ४० वर्ष पनि बितेको थिएन । त्यस दिन कनानी सीसरा र याबीनलाई खेद्नेहरुमा कति जना अझै जीवितै थिए । तिनीहरुकै मुखबाट परमेश्वरले इस्राएलीहरुलाई दिनुभएको छुटकारा उनीहरुले सुनेका थिए । तर आज उनीहरुले फेरि परमेवरलाई ...	Read More »
निको पार्ने काम बिरामीको निम्ति प्रार्थना गर्न विश्वास चाहिन्छ ।
शनिवार ६ जेठ (२० मई) मर्कुस ९ः१४-३२ बिरामीको निम्ति प्रार्थना गर्दा जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छ । जिल्लाको कुबिन्डे४, ज्यामिरेस्थित शमूएल मण्डलीका सदस्यहरुले २०७३ जेठ ६ गते मानसिक स्थिति ठीक नभएकी बिरामी सेतो परियारको निम्ति प्रार्थना गर्दा उक्त घटनाले उग्र रुप लिएपछि ती विश्वासीहरुमाथि मुद्दा चलाइयो र चार जनालाई पाँच वर्षको जेल सजाय र जनही पचास हजारको दरले दण्ड जरिमाना तोकियो ...	Read More »
Daniel Bhatta गत हप्ताको कुरा हो एकजना पास्टर मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दै थिए । त्यस क्रममा बाटोमा उनले एकजना वृद्ध मानिसलाई देखे, त्यसपछि दया लागेर त्यस वृद्ध मानिसलाई बाइकको पछाडिको लिफ्टमा बसाए । जब उनीहरु मोटरसाइकलमा गइरहेका थिए, तब ती वृद्ध मानिसले भने, मेरो छोरा; गत रात स्वर्गमा के भयो तिमीलाई थाहा छ ? ती वृद्ध मानिसको यस्तो कुरा सुनेर पास्टर ...	Read More »
नकुल चौलागाईं भनिन्छ “मृत्युु ,जीवनको बल र शक्ति जिब्रोमा हुन्छ हामिलाइ कमै मात्रमा थाहा छ कि दुई इन्चको जिब्रोले छ फिट्को मानिसलाई कसरी ढाल्न सक्छ सुन्दा पनि जिज्ञासा लाग्न सक्छ मान्छेको शरीर हेर्यो भने छ फिट हुन सक्छ अनि मानव शरीरको जिब्रो नाप्नुहोस लगभग २इन्च “यकजना लेखक को भनाइ छ “जीवन मृत्युको सामर्थ जिब्रोमा छ यसकारण जिब्रोले असल बोल्ने ज्ञान् ...	Read More »
“तपाईंको त बिहे नै भएको रहेनछ, त्यसैले मेरा पीडा, वेदना र भोगाईहरू तपाईं बुझ्नुहुन्न सायद…..।” मतिर एकछिन घोरिएर हेरेपछि बल्ल बल्ल आँट गर्दै एकजना दिदी बोलिन् । महिला हिंसा सम्बन्धी छलफल चलाउँदै गर्दा आफूलाई सम्हाल्न नसकी रोएकी एकजना दिदीले अभिमुखिकरणपछिको छुट्टै कुराकानीका क्रममा ती दिदीले यो कुरा मलाई भनेकी हुन् । करिब १२, १३ वर्ष अगाडि म एक गैर सरकारी ...	Read More »
तिम्रो रगतले लेखेर पठाएको चिठी मैले पाइसकेँ
कुनै समय घटेको घटनाको आज किन हो कुन्नी साह्रै याद आएको छ । यहि घटनाको सम्झनाले आज फेरि सान्धर्भिक लेख लेख्न बाध्य बनाएको छ । मलाई त्यतिखेर प्रेम भन्ने शब्दको अर्थ के हो ? के थाह ! प्रेम गर्ने व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई कसरी प्रेम गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन मलाई ! उमेरले पनि सानो नै थिएँ । जसले जे ...	Read More »